Maxay xulashada Kamala Harris uga dhigan tahay rajada guul ee Biden?
Maddexweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo haatan ah siyaasiga uu Xisbiga Dimoqraadigu u soo doortery inuu madexweyne Donald Trump la tartamo bisha November ayaa shaley ku dhawaaqey in uu madexweyne ku-xigeen u xushey Senator Kamala Harris.
Kamal Harris haweeney 55 jir madow ah oo ka soo jeedda gobolka Calafornia oo ah gobolka ugu weyn 50-ka gobol ee dalka Mareykanka.
Kamala Harris ayaa noqotay haweeneydi ugu horreysay oo madow ah oo loo soo sharraxo xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka. Kamala Harris waxaa iska dhalay aabo asal ahaan kasoo jeeda dalka Jamaica iyo hooyo Hindi ah.
Wariyaha VOA Caasha Ibraahim (Caasha Cuud) ayaa Madaxa Laanta Af Soomaaliga ee VOA, Cabdiraxman Yabarow kala sheekeysatey waxa xulashada Kamala Harris ay ku soo kordhin karto dadaalka uu Joe Biden ugu jiro iinuu Madexweyne Donald Trump ka dhigo Madexweyne hal xilli kaliya Aqal Cad ku hooydey.